Iprojekhthi kunye nezixhobo zesicelo- iBehaihai Composite Materials Co., Ltd.
Icandelo lezeMoto, ezoPhapho kunye noLoliwe.
Isakhiwo se-aluminium engasindi, ukufakwa kwamandla kunye nolawulo lwengxolo ukusebenza okuphezulu, ukuze ibenoluhlu olubanzi lwezicelo kwimizi-mveliso yezithuthi kunye nezothutho.
Icandelo Lobunjineli Nokwakha.
Ingasetyenziselwa njengezinto zokufunxa izandi kwiitonela zikaloliwe, phantsi kweebhulorho zohola wendlela okanye ngaphakathi ngaphakathi kwesakhiwo ngenxa yokugquma kwe-acoustic.
Icandelo loYilo kunye noYilo.
Ingasetyenziselwa njengeepaneli zokuhombisa kwiindonga nakwisilingi, inika inkangeleko eyodwa enobuqaqawuli besinyithi.
Ukulawula ukubuyiswa kwexesha ngokufanelekileyo.
Ingasetyenziselwa kwezi ndawo zilandelayo ukulawula ixesha lokuphinda ubuye kwakhona ngokufanelekileyo: amathala eencwadi, amagumbi okuhlangana, iithiyetha, izitudiyo, i-KTV, amabala emidlalo, indawo yokuhlala, izitishi zikaloliwe, amagumbi okulinda, iihotele kunye neevenkile, iivenkile ezinkulu, amagumbi okubonisa, izindlu ezingenazingcingo, ikhompyuter izindlu njalo njalo.
Ukuthintela iziphumo ze-EMP ezibangelwa yimitha yeNyukliya.
Ingasetyenziswa kwezi zihlandlo zilandelayo ezinjengezindlu zekhompyuter zetelecom, izixhobo ze-elektroniki, usasazo kunye nomabonakude njalo njalo, ngokuba igwebu yealuminium inomsebenzi obalaseleyo wokukhusela umbane kwaye inokuthintela iziphumo ze-EMP ezibangelwa yimitha yenyukliya.
Ukuphelisa isandi kunye nokuMisa ingxolo.
Ingasetyenziselwa kwezi ndawo zilandelayo ukuphelisa isandi kunye nokuphelisa ingxolo: iisilencers zombhobho, i-hend mufflers, amagumbi e-plenum, iindibano zocweyo zokucoca, iivenkile zokuvelisa ukutya, iifektri zamayeza, iivenkile zokuvelisa izixhobo ezichanekileyo, iilebhu, iiwadi kunye namagumbi okusebenza, iicanteen , amaphenyane kunye namagumbi abakhweli, iikhabhathi, isixhobo somoya kunye nezixhobo zokungenisa umoya.
(1) Ukukhanya okuphezulu / ubunzima obuphantsi.
(2) Ukusebenza kakuhle kwekhuselo lesandi (ukufakwa kwe-acoustic).
(3) Ukumelana nomlilo / ukungabi namlilo.
(4) Ukugqwesa okubalaseleyo kokukhuselwa ngombane.
(5) Isiphumo sokugcina kakuhle.
(6) Ukuqhuba kobushushu obuphantsi.
(8) ufakelo Easy.
(9) Izinto ezintle zokuhombisa.
(10) Inokudityaniswa nezinye izinto (umz. Imabhile, i-aluminium sheet, njl.
(12) Inokuphinda isebenze ngokupheleleyo.